धरान । नेपाल र भारतमा बसोबास गर्ने लिम्बु धर्मावलम्बीहरुको दुईदिने धर्मसभा धरानमा सम्पन्न भएको छ । मन्धुम युमा साम्यो धर्मसभाले अबदेखि ‘किरात धर्म’ नमान्ने र नलेख्ने घोषणा गरेको छ । मुन्धुम सभाले गरेको यस्तो घोषणाबाट पूर्वी नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरिरहेका लिम्बुजातिमा तीव्र बहस र तरंग सिर्जना गरेको छ । हंगकङ र बेलायतमा बस्ने लिम्बुहरु पनि धरान घोषणापत्रबाट निर्णयबाट तरंगित भएका छन् ।
मुन्धुमका ज्ञाता बैरागी काइँलाका अनुसार धरानमा आयोजित यो धर्मसभा करिब एक सय वर्षपछि दोस्रोपल्ट गरिएको हो । विसंं १९८८ मा तेह्रथुममा यस्तो चुम्लुङ (सभा) आयोजना भएको थियो । सो सभाले लिम्बु समुदायको बिहे आदिमा फजुल खर्च घटाउने लगायतका निर्णयहरु गरेको थियो ।
किरात धर्मको विकल्पमा युमा धर्म !
धरानमा मंगलबार सम्पन्न धर्मसम्बन्धी दुई दिने गोष्ठी एवं धर्मसभाले एक बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सो घोषणापत्रमा युमा धर्म अवलम्वन गर्ने बताउँदै भनिएको छ- ‘याक्थुम्वा -लिम्बु/सुब्बा) जातिको मौलिक धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धनकका लागि याक्थुम्बा जातिले अनुसरण गरी ल्याएको परम्परागत धर्म संस्कृति र संस्कार नै युमा धर्म हो भनी घोषणा गर्दछ ।’
कार्यक्रममा नेपालबाट चैतन्य सुब्बा, अर्जुनबाबु माबुहाङ लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने भारतबाट आर.आर. खजुम र तेजबहादुर वाइवा लगायतले कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।
अहिलेसम्म किरात धर्म लेख्नेहरुमा लिम्बु, राई, सुनुवार याख्खा, याम्फूहरुसमेत रहेका छन् । तर, लिम्बु समुदाय अब किरात धर्मबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको छ ।
लिम्बूहरुको कान फुक्नुपर्दैन : बैरागी काइँला
लिम्बु समुदायका अभिभावक, साहित्यकार एवं संस्कृतिविद काइँलाले अगाडि भने- ‘लिम्बुले मानेको किरातभित्र युमा नै हो । राईले के लेख्छन्, उनीहरु जानुन् । सुनारले जे लेख्छन्, लेखुन्, याख्खाले जे लेख्छन् लेखुन् । एउटा ‘कमन फयाक्टर’ मात्रै किरात थियो ।’
उनले भने- ‘लिम्बुले परम्परादेखि पालना गर्दै आएको धर्म युमा धर्म नै हो । आस्था परिवर्तन भनेको धर्म परिवर्तन हो । सत्यहाङमा भनेको धर्म परिवर्तन नै हो । कान फुकेर मात्रै लिम्बु हुने हामी ? हामीले त जन्मजात पाएको हो ।’
सत्यहाङमापन्थी तरंगित, फेसबुकमै भनाभन
धरानमा लिम्बु समुदायका फेदाङबा र येवाहरुले बहस गरिरहेका बेला उता किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेको बसोबास रहेको इलामको लारुम्बामा ठूलै तरंग आएको छ ।
आत्मानन्द लिङदेन आफूलाई धर्मगुरु फाल्गुनन्दका चेला बताउँछन् । र, उनीहरुका चेला पूर्वी नेपालमा धेरै छन् । उनीहरुले मान्दै आएको किरात धर्मलाई ‘सत्यहाङमा पन्थ’ समेत भन्ने गरिन्छ ।
लिम्बु समुदायमा दुई प्रकारका धर्म संस्कारहरुको अभ्यास हुने गरेको छ । परम्परावादी लिम्बुहरुले पूजा आजामा कुखुरा, अण्डा र जाँड रक्सी चढाउने गर्छन र उनीहरु आफूलाई युमा साम्यो पन्थी बताउँछन् । सत्यहाङमापन्थीले चाहिँ जाँड रक्सी र मासुको प्रयोग गर्दैनन्, उनीहरु लिम्बुको कानमा मन्त्री फुकेर शाकाहारी साधु बनाउने गर्छन् ।
सत्यहाङमापन्थीहरुले हिन्दुधर्मको नक्कल गरेको र लिम्बेको मौलिकता छाडेको परम्परावादीहरुको आरोप छ । त्यस्तै परम्परावादीहरुले धर्मका नाममा रुढीवाद र विकृतिलाई छाड्न नसकेको हुुनाले फाल्गुनन्दले सत्यहाङमा पन्थको विकास गरेर लिम्बु समाजमा सुधार ल्याएको आत्मानन्द लिङदेनका अनुयायीहरुको मत छ ।
यही मतान्तरका कारण सत्यहाङमापन्थी लिम्बु समुदायले धरानको घोषणालाई अस्वीकार गरेको छ । र, उसले लिम्बु समुदायले युमा धर्मको साटो किरात धर्म नै अपनाउनुपर्ने तर्क गरेको छ ।
यो दुईवटा धारका कारण अब लिम्बु समुदायमा धर्मका नाममा सशक्तरुपमा दुईवटा धारहरुवीचको वैचारिक संघर्ष सतहमा आएको छ ।
यी दुई धारका साथै लिम्बु समुदायमा क्रिश्चियानिटी पनि बढिरहेको छ, जसले लिम्बुहरुको परम्परागत संस्कृतिलाई कमजोर पारिरहेको छ । यसका साथै केही लिम्बुहरु हिन्दुकृत पनि भएका छन् ।
धरान घोषणापत्रले किरात धर्मको साटो युमा धर्म मनाउने घोषणा गर्नासाथ सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस र विवादहरु देखिएका छन् । सत्यहाङमा पन्थी र युमापन्धीवीच आरोप-प्रत्यारोप सघन बनेको छ ।
यसैबीच किरात धर्मका ज्ञाता एवं सत्यहाङमा पन्थका विचारक डा. चन्द्रकुमार शेर्माले युमापन्थी बैरागी काइला (नेम्वाङ) को कडा आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- ‘बैरागी काइँला मासेबुङ (इलाम) मा पापबाट विमोचित भएँ भन्ने ! नेम्वाङ कुलपितृ लतिपा चुक्मिबा मान्ने ! युमा धर्म लिम्बुको मौलिक भनी त्रिधार बोल्ने ?’